XAALADAHA SII KORDHAY IYO XEERARKA DARYEELKA EE PLUMBADA SHIINAHA EE DHEXDA DHEXE - BEEREYAAL IYO DARYEEL
Calaamadaha iyo farqiga udubka shiinaha
Shiinaha Shiinaha, sida ku cad sharaxaad ka mid ah buugaagta tixraaca ee bannaanka u, ka mid ah cuna Prunus L. ee qoyska Rosaceae. Cudurkaan wuxuu ka kooban yahay in ka badan afar darsin oo kala duwan oo ah noocyo kala duwan. Waxaa la koray sidii geed beeran, laakiin sidoo kale laga heli karaa duurka. Xaaladda dambe, way sahlan tahay in laga helo degaannada Waqooyiga Ameerika, Koonfur-Galbeed iyo Galbeed Aasiya.
Roobka Shiinaha waa geedka koraya ilaa 12 m dhererka. Waxay leedahay soodhiyo toosan, kuwaas oo faafin laamaha. Jilifka geedka waa guduud-bunni ama casaan-bunni. Caleemaha qaro weyn ee caleenta ah ayaa caan u ah, waxay u koraan caleemaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah ee saldhigoodu sarreeyo oo leh saldhig saldhig leh, caarad fiiqan iyo cirif ribbed ah. Kordhi ilaa 12 cm oo dherer ah iyo 5 cm oo ballac ah, leh muraayad dhalaalaya oo madow.
Ma taqaanaa? Wajiga beerta waxaa loo tixgeliyaa Bariga Faro iyo Shiinaha, laga bilaabo halka uu ku faafay qaybaha kale ee adduunka. Boorash ka soo jeeda noocyada Ussurian, kaas oo awood u leh inuu u adkeysto heerkulka hoos -50 ° C, ayaa xidid ka qaatay xarigkeenna.
Iyada oo nooca ubax iyo fruiting, plomme Shiinaha waxay leedahay farqi muuqda laga bilaabo guriga plomme. Shiineeyska Shiinuhu wuxuu hore u barbar-kiciyay (bishii Abriil), si dhakhso ah iyo si ba'an ku daboolay burooyinkeeda. On a miraha geedka sanadlaha waa dhif ah, iyo dadka waaweyn oo ka muuqan on spur ama duufaannada bouquet.
Ubaxyo caddaan ah ayaa ku yaala axils ee caleemaha, celcelis ahaan, saddex qaybood, ubax ka hor caleemaha u muuqdaan geedka. Miro miraha si guul leh u leh. Miro, qaab-wadnaha-qaabaysan ama miro-buluug ayaa soo gala midabo kala duwan: laga bilaabo guduud dhalaalaya illaa huruud. Jidhkoodu waa mid casri ah, macaan iyo dhanaan, wuxuu isku wada dhejiyaa dhagaxa. Beerta qaarkeed waxay aaminsan yihiin in shiinada Shiinaha ay ka liidato dhadhanka guriga, halka kuwa kale, lid ku ah, xusuusnow dhadhankiisa gaarka ah.
Faa'iidooyinka iyo tabarrada ee plomme Shiinaha
Laga soo bilaabo sharaxaad kor ku xusan waxay muujinaysaa faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee plomme. Waxaa lagu daboolay midab ka horeeya kuwa kale, siday u kala horreeyaan, waxay bilaabmaysaa inay midho hore soo baxdo. Goosashada waxay bixisaa wax badan. Miraha waa muuqaal muuqaal ah oo dhadhan, gaadiidka dulqaadka. Sidoo kale, geedka wuxuu u adkaystaa cudurada iyo cayayaanka.
Ma taqaanaa? Waxaa la aaminsan yahay in nooc kasta oo tobneedba ah ee dabiiciga ah uu ka yimaado Shiinaha.
Si kastaba ha ahaatee, geedkan midhaha leh waxay leedahay cilladaheeda. Isla sidaas oo kale horaan ubax waxaa lagu qabsan karaa dhaxan dambe, ka dibna waa inaadan ku xisaabin goosashada wanaagsan. Inta lagu jiro ubax, shinni badan iyo cayayaanka kale, sidaas darteed pollinating tubta waa adag tahay. Goostay, inkasta oo si sahlan loo qaado, laakiin aan la qalajin karin. Jilif ee collar xididka badanaa wuxuu ku biiraa jilif, taas oo u nugul geed.
Dhoofinta Shimbiraha Shiinaha
Sidii horayba loo soo sheegay, Boorashka Shiinaha ayaa dhibaato ka heysta pollinating. Ka sokow xaqiiqda ah in guga hore waxaa jira cayayaanka yar oo dhimi lahaa ubax, sidaas darteed inta badan ee kala duwan ee geed this waxay u baahan tahay tiro ah pollinators. Boorka ayaa ugu fiican kaalintan. Laakiin haddii aad ku beerato noocyo dhowr ah oo ka mid ah xayawaanka Shiinaha ee ku dhow, xoqin ayaa sidoo kale dhici doona.
Iyadoo leh pollination guul leh, ugxansidaha u muuqdaan ku dhowaad ubax kasta. Sidaa daraadeed, midhaha dhadhan ahaanba waxay ku dheggan yihiin laan kasta, si tartiib ah ayey u korayaan.
Haddii aad xiiseyneysid Shiinaha Shiinaha, waxaan kuu sheegi doonaa sida aad u kori lahayd geed agagaarahaaga ah. Waa lagama maarmaan in la doorto meel ay si fiican u iftiimaan oo ay u kululaadaan qorraxda qorraxda, laakiin isla wakhtigaas waa laga xiray qoraalada. Sidaa darteed, meesha ugu fiican waxay noqon laheyd buur buur furan. Waa hagaag, haddii geedka laga xiro dhinaca woqooyiga derbiga.
Carrabku waa inuu ahaadaa cawl, dhoobo, kaynta ama chernozem leh alkaline ama jawi dhexdhexaad ah. Waxaa muhiim ah in ciidda ay hodan ku tahay calcium.
Waa muhiim! Biyaha dhulka hoostiisa ah ee laga helo beerto Shiinaha waa inay ku jiifisaa qoto dheer 1.5 mitir ama ka badan.
Wixii beerto waxay qaadataa sapling ugu yaraan hal sano. Iyo haddii plomme guriga lagu beeray guga, ka dibna tubta Shiinaha u baahan tahay beeritaanka dayrta. Nidaamka asaasiga ah wuxuu ku habboon yahay heerkulka hooseeya, sidaas awgeed jiilaalka geedka wuxuu leeyahay waqti uu qaato xidid iyo horumarinta xididada, iyo guga wuxuu ku hagaa dhammaan miirista muhiimka u ah koritaanka iyo taajka.
Goobta degitaanka waa in la diyaariyaa dhawr maalmood. Goobta waxaa lagu qoday iyadoo la hirgelinayo 700 g oo ah burka dolomite halkii mitir labajibbaaran oo dhulka ah. Tani waxay gacan ka geysaneysaa yaraynta aaladaha hawada, haddii loo baahdo. Ceelka ayaa la sameeyaa aan ka yarayn 18 maalmood ka hor inta aan la furin. Dhererka lagu taliyey iyo width - 70 cm, qoto dheer - aan ka yarayn 60 cm. On maalinta beerto, seedling waa in la nadiifiyo by laga saaro xididdada la qalajiyey iyo laamihii jabay. Ka dibna xididdada ayaa lagu dhajiyay xal dhoobo ah ugu yaraan saacad. Beerta qaar ayaa ku talineysa inay halkaas ka tagto ilaa shan saacadood. Dhoobada, waxaad ku dari kartaa daroogada "Epin" si aad u kiciso koritaanka geed ama xal casaanka ah ee casaanka kiriimiga ah.
Haddii dhowr geed oo loo diyaar garoobo beeritaanka, fadlan ogow in masaafada u dhexaysa waa inay ahaataa ugu yaraan 1.5 mitir, iyo inta u dhaxeysa saf - 2 mitir.
Geedi socodka iyo dejinta nidaamka
20cmkii ugu horreeyay ee carrada ah ee laga saaro godka ayaa si gooni gooni ah loo dhigay - tani waa lakabka lakabada ee carrada. Waxaa isku qasan yahay qadar isku mid ah peat, humus, compost ama digada. Qeybta hoose ee ceelka dhulka la heli karo waxaa laga heli karaa tuulo, kaas oo jeex ah la geliyo 15-20 cm ka soo xarunta. Boorka waa inuu ka soo baxaa godadka ilaa 70 cm.
Waxaa lagu talinayaa in lagu daro isku dar ah 10 litir oo digada ah, 300 g oo ah superphosphates iyo 50 g oo ah cusbo potassium godka. Qoorta ayaa hoos loogu dhufanayaa daloolka si qoorta xididku u koraan 7 cm korka dushiisa. Xididdada ceelka waa in si taxadar leh loo toosiyaa.
Ma taqaanaa? Shiineyska xitaa xitaa iyada oo dhammaan sharciyada tiknoolajiyada beeraha ku nool yihiin wax ka badan 25 sano.
Taas ka dib, godadka ayaa buuxshay ilaa kala badh, dhulkuna waa la tampered iyo ku shubay baaldi biyo ah. Haddii dhulka uu si xun u dhaqmo, hulaalka waxaa la aasaasay halkaas, taas oo ay sabab u tahay xididdada dhirta la qalajiyey. Ka dib markaa, ciidda haray way buuxsantaa, daloolna waxaa loo sameeyaa qoorta (qiyaastii 40 cm dhexroor). Qalabaynta waa in lagu xiraa qallaji iyo waraabiyo (ugu yaraan saddex baaldiyo oo biyo ah). Marka qoyaanka la nuugo si looga hortago uumiga, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daadiyo miraha ama sida balka sida dhererkiisu yahay 5 cm oo sarre u wareegsan. Waraabinta ugu horreysa ka dib markii laga beerto waxaa la sameeyaa ka dib laba toddobaad.
Noocyada daryeelka ee plomme Shiinaha
Boorashka Shiinaha, sida dhirta kale, wuxuu u baahan yahay xeerar gaar ah ee beerashada.
Geedku si fiican ayuu ujiraa abaar gaaban, laakiin guga iyo xagaaga inta lagu jiro xilliyada kuleylka aadka u daran, waraabinta inta badan waa lagama maarmaan. Kaa ku sii daa qiyaasta baaldi halkii mitir oo labajibbaaran oo ah qiyaasta taajka.
Waa muhiim! Waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero xaaladda colaadaha xididka ah ee geed yar, tan iyo qaybta dhexe ee uu diirran yahay, taas oo ah sababta geedku dhinto. Si looga hortago dhibaato, 40 cm buur oo sare ah ayaa la sameeyaa agagaarka jirka, gaar ahaan haddii lagu beeray carrada culus ama dhulka hoose..
Ka dib markii la waraabiyo, waxaa lagu talinayaa in la daboolo ciidda si qoto dheer ah 5cm. Ha iloobin kuulada geedka geedaha qoryaha, compost ama peat lakabka 8 ilaa 12 cm.
Guga, marka geedka bilaabaa si firfircoon u horumariyaan, Bacriminta nitrogen waxaa laga codsadaa si ay u caawiyaan geedka foomka caleemaha cusub. Waxaa lagu talinayaa in la qaato 25 g oo amooniyam ah, isla heerkeed HOL iyo laba kiilo oo ah mullein halkii mitir labajibbaaran. Dhammaan tani waxaa la gooyaa baaldi biyo ah, waana tan sida dhirta loo waraabiyo.
Xilliga xagaaga, geedka waxaa la quudiyaa dhowr jeer iyadoo isku dar ah ash (200 g halkii mitir), potassium (20 g) iyo fosfooraska (60 g). Bilowga xilliga dayrta waxaa lagula talinayaa in lagu daro 15 - 20 g of nitroammofoski.
Roobka Shiinaha wuxuu u baahan yahay manjooyin xilliyeed. Kowaad waa la fuliyaa isla markiiba ka dib markii laga beerto, marka seedling waxaa la soo gaabin ilaa qiyaastii kala bar. Tani waxay ka caawisaa geedka in la isticmaalo xaalado cusub oo dhakhso ah oo si firfircoon u kobciya caleemo cusub. Markaas, xilliga jiilaalka iyo horraanta gu'ga, laamaha qalajinta ayaa la gooyaa. Goolasha koonfurta gobollada waxaa la samayn karaa xilliga dayrta.
Waa muhiim! Xilliga qaboobaha, waxaad ku fili kartaa keliya kiisaska heerkulka hawada uusan ka yarayn 15 ° C.
Waxaa sidoo kale lagu talinayaa guga si loo sameeyo manjooyin qaabeyn. Isla markiiba ka dib markii dhaxan ugu dambeeyey, caleemaha kora kor iyo kuwa dhumucda taajka laga saaro. Ka dib markii, caleemaha ee sanadkii la soo dhaafay waa kala badh.
Ha illoobin inaad isticmaasho qalab fiiqan oo jeermis lagu gooyo si aad u gooysid, oo meelo kala duduwan ku dheji leh beerta beerta.
Maalinta jiilaalka, waxaa lagama maarmaan ah in la ururiyo caleemaha dhiciddaa caleenta hareeraha, ka saar meesha iyo gubi. Wareegyada Pristvolnye waxay u baahan yihiin inay qodaan.
Geedka agoonta ah ayaa si fudud u qaboojiya jiilaalka iyada oo aan hoy ku jirin, laakiin dhirta da'da yar ee da'da 2-3 sano waa in lagu xiraa joonis ama lapnik laba lakab. Ha isticmaalin qalabka synthetic tan this, maadaama ay dhirta iyaga oo ka hooseysa iyaga.
Cudurada suurtagalka ah iyo cayayaanka ee plomas Shiinaha
Faa'iidada geedku waa in ay u adkaysato cudurrada dhirta miraha ah ay inta badan ku dhacaan. Hase ahaatee, mararka qaarkood shooga Shiinaha waa la yaabay sida ugu badan ee monocleosis ama asperiasis. Wixii daaweynta iyo ka hortagga alwaax la daweeyay 3% xal Bordeaux. Sida daaweynta prophylactic waxaa lagu fuliyaa ka hor ubax ee geedka. Of cayayaanka, khatarta waa miro miro macaan, kaas oo baabi'iyo caleemaha geedka iyo daloosha midhaha. Si looga hortago dhacdadeeda, inta lagu guda jiro xilliga ubaxa, geedka waxaa lagu buufiyaa kiimikooyin gaar ah labadii usbuucba mar, joojinta bil ka hor goosashada. Gubashooyinka Pheramon sidoo kale waa kuwo wax ku ool ah.
Boorashka Shiinaha waa bedel wanaagsan oo loogu talagalay xayawaanka guriga joogtada ah. Miraha ay ku badan yihiin, casiir leh iyo bislaado ka hor inta caadiga ah. Daryeelidda waxay u dhow tahay isla sidii caadiga ah tubta caadiga ah, sidaas darteed dhibaatooyinka leh beerashada ma soo baxaan. Inkastoo ay leedahay cilladaheeda: suurtagalnimada ubaxyada lagu keydiyo inta lagu jiro dhaxanki ugu dambeeyey, dhibaatooyin leh pollination. Laakiin haddii aad raacdo dhammaan talooyinka loogu talagalay xannaanadda Shiinaha Shiinaha, waxaad ka heli doontaa goosashada dhadhan fiican leh.